Om du får uppehållstillstånd för att bo med någon som är medborgare i ett land utanför EU - Migrationsverket
Go’aanka sharciga deggenaanshaha haddii aad qof Iswiidhan deggen u soo guurayso
Efter beslut om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige – somaliska
Marka ay Hey’adda laanta socdaalku go’aan ka gaarto codsigaaga ku saabsan sharciga deggenaanshaha markaa qof ka mid ah qoyskaaga Iswiidhan jooga ayaa ku wargelinaya go’aanka, haddii aad qofkaas isaga ama iyada siiso awood buuxda inay adiga wakiil kaa noqdaan. Haddii aanad markaa jirin qof wakiil kaa noqdaa waxaad jawaabta ka ogaanaysaa safaarada ama qunsuliyada.
kaarka sharciga deggenaanshaha
Qofka la siiyo sharciga deggenaanshaha ee ka badan muddo sadex bilood ah waxa la siiyaa kaar sharciga deggenaanshaha ah. Kaarku wuxuu caddeynayaa inaad oggolaansho u haysato inaad Iswiidhan joogikartid waxaana kaarka ku yaala sawir aad adigu leedahay iyo sawirka farahaaga.
Akhri warbixin intaa dheeraad ah oo ku saabsan sharciga deggenaanshahah
Haddii aad u baahan tahay fiise aad wadanka Iswiidhan ku timaado
Haddii aad u baahato fiise aad rabto inaad Iswiidhan ku timaado iyadoon sawir lagaa qaadin ama aan faraha lagaa sawirin markii aad codsiga samaynaysay ee interfiyuuga lagaa qaadayey waxaad markaa u tegeysaa safaarada ama qunsulka guud si laguugu sameeyo adiga kaarka sharciga deggenaanshaha. Safaaradaha iyo qunsulada guud oo dhami malaha fursad ay adiga sawir kaaga qaadikaraan ama ay farahaaga ku sawirikaraan. Sidaas daraadeed si aad u hesho warbixin dheeraad ah waxa fiican inaad marwalba la xiriirto safaarada ama qunsuliyada guud. Marka aad safaarada booqanayso waxaad hore u sii qaadanaysaa baasaboorkaaga.
Safaarada kuugu dhow waxaad ka heleysaa Swedenbroad.com
Marka ay safaarada ama qusuliyada guud diyaariso kaarka adiga ayey ku siinaysaa ama way kuu soo diraysaa. U fiirso waxay qaadankartaa afar usbuuc marka la og’aamiyo in adiga kaar laguu samaynayo waxaana laga bixinayaa safaarada ama qunsuliyada guud, laakiin shuruuda ku xirani waa in adiga sawir iyo farahaba lagaa qaaday. Marka aad wadanka Iswiidhan geleysid waa in aad tustaa kaarkaaga iyo baasaboorkaaga oo wada socda.
Ma dhacayso in kaarka si degdeg ah loo sameeyo ama wakhtiga la soo gaabiyo. Marka dalabka kaarka la sameeyo wixii ka dambeeya lama bedelikaro meesha kaarka loo dirayo.
Haddii aad fiise la’aan ku socdaali kartid
Haddii aad Iswiidhan aadayso adigoon fiise haysan waxaad markaa tusaysaa koobiga go’aankii lagaa gaaray marka aad wadanka geleyso. Marka aad wadanka Iswiidhan timaado sida ugu dhakhsaha badan ayaad wakhti uga qabsanaysaa Hey’adda laanta socdaalka si sawirna lagaaga qaado farahana lagaaga sawiro. Marka aad booqanayso Hey’adda laanta socdaalka waxaad hore u sii qaadanaysaa baasaboorkaaga. Marka laguu sameeyo kaarkaaga sharciga deggenaanshaha waxa markaa laguugu soo dirayaa cinwaanka aad ka deggen tahay Iswiidhan.
Ma dhacayso in kaarka si degdeg ah loo sameeyo ama wakhtiga la soo gaabiyo. Marka dalabka kaarka la sameeyo wixii ka dambeeya lama bedelikaro meesha kaarka loo dirayo
Wakhti ka ballanso Hey’adda laanta socdaalka si faraha lagaaga sawiro sawirna lagaa qaado haddii aad Iswiidhan ku tagto fiise la’aan (Bogga af-ingiriisiga)
Ilaa iyo inta uu shaqaynayo oggolaanshuhu
Lamaanaha isqaba, lamaanaha isku diiwaangashan iyo kuwa nolosha wadaaga (sambor)
Haddii aad la isla deggen tihiin ninkaaga, xaaskaaga, laba qof oo wada deggen ama kuwa nolosha wadaaga kuwaas oo deggen wadan aan Iswiidhan ahayn oo ugu yaraan isla degenaan laba sannadood wax inta badan dadkaas la siiyaa sharciga deggenaanshaha joogtada ah.
Haddii aydaan idinku isla deggeneyn wadan shisheeye waxaad markaa adiga lagu siinayaa sharciga deggenaanshaha oo laba sanadood ah. Xaaladaha qaarkood waxa adiga lagu siinayaa sharciga deggenaanshaha oo wakhti gaaban ah, hase yeeshee ugu yaraan hal sano. Hase ahaatee weligaa laguma siinayo sharciga deggenaanshaha oo ka badan wakhtiga uu baasaboorkaagu ku eg yahay ama dhaco.
Haddii ninkaagu, xaaskaagu, lamaanaha aad isla deggen tihiin ama qofka aad nolosha wadaagtaan uu magangelyo codsaday isla markaa la siiyey sharci deggenaansho ah oo ku meelgaar ah waxa markaa adigana lagu siinayaa sharciga deggenaanshaha ee uu haysto qofka aad la deggen tahay oo kale.
Haddii aad rabto inaad sii deggenaato wadanka Iswiidhan kadib marka uu wakhtigii ruqsada oggolaanshuhu kaa dhacay waxaad markaa codsanaysaa in laguu dheereeyo sharcigaaga deggenaanshaha.
Ka akhri warbixin intaa dheeraad ah sida aad u dheeraysanaysid sharicgaaga deggenaanshaha (Bogga af-ingiriisiga)
Carruurta ka yar 19 jirka
Haddii ilmo carruur ahi uu la codsado waalidkii, ama uu rabo inuu u soo guuro waalidkii kaas oo deggen wadanka Iswiidhan, waxa ilmaha la siinayaa ruqsada oggolaanshaha ee waalidka la siiyo oo kale.
Qof kale oo qaraaabo dhow ah oo ka weyn 18 jir
Haddii adiga lagu siiyo ruqsada oggolaanshaha waxa inta badan lagu siinayaa sharciga oggolaanshaha joogtada ah
Haddii xiriirkiina guurku dhammaado
Haddii xiriirkiina guurku dhammaado oo aad isfurtaan inta aad haysato sharciga deggenaanshaha ku meelgaarka ah marmarka qaarkood oo keliya ayuun baa laguu oggol yahay in laguu dheereeyo sharcigaaga deggenaanshaha. Hey’add laanta socdaalku xitaa way kaala noqonkartaa sharciga deggenaanshaha. Qofkasta si gaar ah ayaa arrintiisa loo tixgelinayaa haddii ay jirto sabab loogu oggolaankaro in loo sii dheereeyo sharciga deggenaanshaha.
Haddii xiriirkii guurkiinu dhammaaday oo aad isfurteen inta aad haysato sharciga ku meelgaarka ah adiga ayaa markaa keligaa codsi cusub ka soo samaynaya Hey’adda laanta socdaalka sababta aad u rabto inaad Iswiidhan u deggenaato.
Ka akhri warbixin intaa dheer oo ku saabsan sida sharciga deggenaanshaha loo dheereeyo markuu dhaco ingiriisi (Bogga af-ingiriisiga)
Hey’adda laanta socdaalku way la noqonkartaa ruqsada oggolaanshaha
Ruqsadaada oggolaanshaha waa lagaala noqonkaraa haddii markii aad codsiga samanaysay aad sheegtay wax aan sax ahayn ama aanad sheegin wax muhiim u ah sharcigaaga degenaanshaha. Waxa kale oo ruqsada oggolaanshaha lagaagala noqonayaa haddii shuruudihii lagaaga baahnaa ruqsada ogolaanshaha aaynay wada buuxin.
Haddii diidmo lagaa siiyo codsigaaga
Haddii ay Hey’adda laanta socdaalku diidmo kaa siiso codsigaaga rafcaan ayaad markaa ka qaadanaysaa muddo sadex usbuuc gudahooda ah laga bilaabo maalinta aad hesho go’aankii lagaa gaaray. Sida aad rafcaanka uga qaadanayso waxaad ka heleysaa oo uu la socdaa go’aanka laguu soo diray. Haddii aad qof awood buuxda u siisay inuu adiga ku metelo ama wadkiil kaa noqdo qofkaas ayaa markaa dacwada kuu sii wadaya. Haddii ay da’daadu ka yar tahay 18 jir adiga keligaa rafcaan arrinta kama qaadankartid. Waalidkaa ama qofkale oo adiga mas’uul kaa ah ayaa rafcaanka kuu qaadikara.
Ka akhri warbixin dheeraad ah waxa dhacaya haddii aad ku sugan tahay wadanka Iswiidhan oo ay Hey’adda laanta socdaalku diidmo kaa siisay codsigaagii
Awood siinta qofka aad adigu wakiilanayso
Haddii aad doonayso inuu qof adiga arrimhaaga ay Hey’adda laanta socdaalku gacanta ku hayso uu qof kaaga wakiil noqdo waxaad qofkaa siinaysaa awood buuxda. Awood buuxda qofkale ayaa tusaald ahaan loo siinkaraa inuu codsi sameeyo, in la siiyo go’aankii lagaa gaaray ama inuu go’aankii lagaa gaaray rafcaan ka qaadankaro. Marka qofka awooda buuxda la saanayo qofka waad u qoraysaa kadibna adiga ayaa saxiixaya inaad qofkaa u siisay awood buuxda markaa haddii ay Hey’adda laanta socdaalku u baahato waxa uu qofkaasi tusayaa warqaddii loogu saxiixay ee orijinaalka ahayd. Qofka ay da’diiso ka weyn tahay 18 jir ee raba inuu qof qoyskiisa ka mid ahi wakiil u noqdo wuxuu qofkaa qudhiisu u baahan yahay inuu qofka wakiilka ka noqonaya awood buuxda siiyo.
Haddii aad rabto inaad qof awood buuxda u siiso arrimahaaga waxaad markaa isticmaalikartaa foomka Awood siinta (blanketten Fullmakt). Foomku wuxuu khuseeyaa qofka hore u codsaday sharciga deggenaanshaha isagoo ku sodsanaya sabab shaqo, waxbarasho, inuu cid wadanka joogta soo dalbanayo ama uu booqasho ku imanayo.
Power of Attorney, form number 107011 (Bogga af-ingiriisiga)